China Ummeli ocacisa iBT-9803 uMvelisi kunye noMthengisi | BGT
Ukucacisa iAgent BT-9803
I-BT-9803 Luhlobo lokuthengisa ngobuninzi lweChloro DBS. Ayinayo imichiza ye-viscosity, ke kulula ukuyilungisa kwaye ayizukunamathela kwi-roller.
I-BT-9803 ngumgangatho ophuculweyo we-Chloro-DBS yokuCacisa uMmeli ngokusebenza okuphezulu kwaye ngaphandle kwe-viscosity ngexesha lokulungiswa.
Ngaba ukunciphisa umsi kunye nokuphucula ukucaca kwepolypropylene.
Ngaba ukunyusa ubushushu ukumelana, ukuze iimveliso PP zingasetyenziswa kwi-oven microwave.
Ngaba ukuphucula umphezulu ukuguda kweemveliso ezigqityiweyo.
Ngaba ukuqina eyomeleziweyo inxalenye oluxonxiweyo kunye nexesha elifutshane umjikelo ngexesha lenkqubo yokubumba.
Kukulungele ukunxibelelana kokutya kunye nezicelo zonyango.
I-BT-9803Ukucaciswa okuphezulu kweArhente ye-polypropylene homopolymer, ikopolymer engahleliwe. Inokudityaniswa ngokuthe ngqo nezinto ze-PP kwisicelo okanye yenze i-masterbatch ebonakalayo ngaphambi kokusebenzisa. Inokunika ukukhanya okuphezulu, yonyuse ubushushu kwaye iphucule iipropathi zoomatshini,. Imichiza eyazisiweyo iya kusetyenziswa kumbumba obunjiweyo wenaliti, ifilimu extrusion, ukubumba ukubetha kunye nokujikeleza ukubumba.
Ukukhokelela kwimarike yokubumba inaliti, zininzi iimveliso ezinokuveliswa, kubandakanya izinto zendlu, iimeko zokugcina, iihenjisi eziphilayo, izikhongozeli zodonga olucekeceke kunye neesirinji ezilahlayo kunye nokucacisa iibhotile zeplypropylene ezibunjiweyo zamayeza, iziqholo, iijusi, iisosi, iivithamini kunye neebhotile zabantwana .
Ingasetyenziswa kwi-PP kunye ne-LLDPE
Ummeli wenyukliya luhlobo lwearhente efanelekileyo yeeplastikhi ezingagqitywanga ezenziwe njengeplypropylene kunye ne-polyethylene. Ngokutshintsha isimilo crystallization yentlaka kunye ukukhawulezisa izinga crystallization, uyakwazi ukuphumeza injongo yokunciphisa umjikelo yokubumba, ukwandisa isicwebe komhlaba ngaphaya, ngqongqo, ubushushu deformation thermal, eqine amandla nefuthe ukumelana neemveliso ezigqityiweyo.
Polymer ilungiswe ngu Ummeli wenyukliya, Ayigcini kuphela kwiimpawu zokuqala zepolymer, kodwa ikwanomlinganiso wexabiso lentsebenzo elingcono kunezinto ezininzi ezinomsebenzi olungileyo wokusebenza kunye noluhlu olubanzi lwesicelo. Sebenzisa Ummeli wenyukliya kwi-polypropylene ayitshintshi iglasi kuphela, kodwa ithathe indawo yeepolymers ezinje ngePET, HD, PS, PVC, PC, njl.nokwenza ukupakishwa kokutya, izinto zonyango, inqaku lenkcubeko lokusetyenziswa kwemihla ngemihla, ukucacisa iphepha lokusonga kunye nezinye iitafile zebanga eliphezulu.
Egqithileyo Ukucacisa iAgent BT-9805
Okulandelayo: Ukususa ivumba